Ukuthenga Isakhiwo E-Dubai Njengokwemithetho Ethengiswayo | Izinkampani Zomthetho eDubai
Ukuthenga Indawo E-Dubai Njengomthetho Wezezakhiwo
Ukuthenga impahla e-Dubai bekungakaqondile ngaso sonke isikhathi futhi kuqondiswe njengoba kushiwo manje. Kepha izinto sezingcono kakhulu manje. Kunezinyathelo ezine eziyisisekelo ezingokomthetho zokuthenga impahla eDubai, futhi sizobheka zonke kule ndatshana.
ungathola ukutshala imali ekhaya lakho elilandelayo / real estate.
ukuthenga impahla bushelelezi futhi kuyashesha
Umthengi kufanele abhaliswe ne-RERA.
Khumbula ukuthi njengowakwelinye izwe, uvunyelwe ukuthenga izakhiwo kuphela ezindaweni ezibizwa ngokuthi Ezikhethiwe ZaseDubai. Le miphakathi iphethwe yiNkosana yomqhele yaseDubai ukuvumela abantu be-non-UAE nabangewona ama-GCC ukuthi bathole ithuba lokuba nezindlu emirate.
Manje njengoba sikususile lokho, ake sibheke ukuthi ungakuthola kanjani ukulungele ukubeka imali ngokwezindlu zakho ezilandelayo. Ngakho-ke, ngokuyisisekelo, uma kukhulunywa ngokuthenga impahla eDubai, kumele kulandelwe lezi zinyathelo ezilandelayo zomthetho njengokulandela imithetho yezezakhiwo.
1. Ukusungula Isivumelwano Somthengi Kanye Nomthengisi
Lapho usuwenzile usesho lwakho, uthole impahla efanelekile, wenza ucwaningo olunzulu kunjiniyela, indawo yaseDubai, ukuthi iyini i-ROI, nokuningi, ungaqhubeka nesinyathelo sokuqala, okuwukuxoxisana ngemibandela yokuthengisa online. nomthengisi. Ungasenza lesi sinyathelo ngaphandle kosizo lwe-ejenti yempahla noma umeluleki wezomthetho. Konke okunye kufanele kwenziwe yi-Dubai real estate agency noma amafemu okuhlala asemthethweni enza lokhu ngokomthetho wezezindawo.
2. Ukusayina Isivumelwano Sokuthengisa Njengomthetho Wezezakhiwo
Ngemuva kwalokho, into elandelayo ukusayina isivumelwano sokuthengisa esibizwa nangokuthi iMemorandum of Understanding (MOU). Lo mbhalo eDubai unesihloko esithi contract F futhi uyatholakala kuwebhusayithi yoMnyango Wezomhlaba eDubai. Izinga eDubai liyidiphozithi le-10% empahleni okufanele likhokhwe kumthengisi ngasikhathi sinye. Lapho lesi sinyathelo sesiqediwe, usuphakathi nenqubo.
3. Ukufaka isicelo Sesitifiketi Sokungavumi (NOC)
Okulandelayo, uzohlangana nomthengisi ehhovisi lonjiniyela. Isizathu salo mhlangano ukufaka isicelo nokukhokhela isitifiketi seNo Objection (NOC) sokudlulisela ubunikazi. I-NOC izokhishwa ngunjiniyela, kepha ngemuva kokuqinisekisa ukuthi azikho izimali ezikhokhwayo kuleyo ndawo ngezindleko zenkonzo.
4. Ukusebenza Kwedluliswa kobunikazi Nomnyango Wezomhlaba eDubai
Lapho i-NOC isitholakele, uzobe uhlangana nomthengisi ehhovisi loMnyango Wezomhlaba eDubai ukuze kudluliselwe kuphothulwe. I-DLD izokucela ukuthi wenze inkokhelo yempahla ngendlela yesheke lemenenja. Lokhu kubheka kuzokhokhwa kumthengisi ngosuku lokudlulisa. Ekugcineni, kuzokhishwa itayitela entsha entsha ngegama lakho, futhi uzoba ngumnikazi wepropathi eDubai ngokusemthethweni.
Izindlela Ehlukile Zokuthenga Indlu E-Dubai
Uma ungakwazi ukukhokhela impahla ngokheshi, kuzofanela ufake isicelo sobambiso.
Ukuthenga impahla njenge-expat kungazwakala kuyinkimbinkimbi, kunezingqinamba ezahlukahlukene ezikwazi ukukhubazeka abadlali abasebenza isikhathi esincane. Kepha uMnyango Wezomhlaba waseDubai nezinye izinhlaka eziphethe umthetho wenza inqubo yokuthenga impahla ibusheleleke futhi isheshe.
Ngabe kufanele ngithenge impahla esehlelweni?
Yize kuqhathaniswa nezinye izindlela, lokhu kuthatha isikhathi. Empeleni kuyindlela elula yokuthenga impahla eDubai.
Umthengi kufanele angenise ifomu lesicelo kunjiniyela.
Ngokwamukelwa kwesicelo, umthengi uzobhekisa esikhungweni sokuthengisa sonjiniyela ngosuku olwenzelwe ngaphambilini ukukhetha iyunithi futhi akhokhe idiphozithi yokuqala.
Ngokuya ngezinga lokuqedwa kwayo, umthengi angahle alinde iminyaka emi-2 kuya kwemi-3 ngaphambi kokuthola impahla. Umthuthukisi uzonikezela ngosuku lokuqeda.
Kungani kufanele uthenge impahla emakethe yesibili?
Le ndlela iyindlela esheshayo yokuthola impahla eDubai, kepha le nqubo iyinkimbinkimbi, okubandakanya izindleko ezimbalwa zezimali.
Umtshalizimali ofuna ukuthenga impahla lapho ethengisa khona enendawo yokuhlala kufanele akwazi ukukhipha imali yomthengisi ngaphambi kokuba itayitela lokuqoqa lithethwe emnyangweni wezemihlaba.
Lapho impahla sesibanjiwe, umthengi uletha umnikelo kumthengisi, futhi uma lokhu kunikezwa sekumukelwe, umphakeli womthengisi ukhiqiza imemorandamu yokuqonda (inkontileka), esho izindleko nezithwalo zonke zeqembu.
Umthengi uyobe esekhokha idiphozithi yamaphesenti ayishumi egameni lomthengisi ukuze avikele impahla.
Kuya ngokuthi umthengi ukhokha ukheshi noma usebenzisa imali mboleko, isinyathelo esilandelayo sifaka ibhange lomthengi elenza inqubo yokuhlola leyo mpahla futhi aqinisekise ukuthi iphephe ngokwanele.
Lapho imvume yokugcina seyenziwe bese umthengi ekuthola lokhu. Umthengisi uyobe esefaka isicelo sokwamukela isitifiketi seNo Objection (NOC) kusuka kunjiniyela.
Kube sekubekwa incwadi yokuqokwa kuMnyango Wezomhlaba ukuze kuqedwe ukudluliselwa.
Ngazo zonke izinqubo ezibhalisiwe, umthengi kuzodingeka akhokhe i-2% ne-AED315 eMnyangweni Wezomhlaba waseDubai, kanye nentengo yokuthenga kumthengisi nekhomishini kumenzeli.
Umthengi uyobe esethola itayitela lezinhloko, elizoba egameni lakhe, kanye nezikhiye namakhadi okungena endlini entsha.
Ngingakuthola kanjani ukuvunyelwa kwangaphambi kokuvunywa kwempahla ebanjiswayo?
Uma ungakwazi ukukhokha imali yempahla, kuzofanela ufake isicelo sobambiso. Ukuvikela ukuvunywa kwempahla ebanjiswayo, nansi imibhalo elula okufanele uyilungiselele:
Incwadi yomholo evela kumqashi wakho
Iholo lilayitha olitholile.
Isitatimende sasebhange esivela ezinyangeni eziyisithupha ezedlule.
Ikhophi yephasiphothi enesithombe nekhasi le-visa.
Ikhophi le-Emirates ID.
Ikhophi yezitatimende zamakhadi esikweletu.
Isigaba sokwamukelwa kwempahla yokuqala kuthatha izinsuku eziyisikhombisa kwababolekisi abakhokhelwa futhi kuthatha isikhathi eside kubantu abazisebenzelayo.
Yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene zamanani empahla yesakhiwo?
Intengo Yohlu: Intengo ebuzwayo yendawo yintengo yohlu okungathengiswana ngayo.
Intengo Yokuthengisa: Intengo yokuthengisa yintengo umnikazi ahlala kuyo.
Inani Elitholwayo: Inani elinikezwa ngumthengisi wezezindawo ngokuqhathanisa inani lempahla nezinye izakhiwo emakethe.
Yiziphi ezinye izindleko okufanele zibhekwe?
Uma kukhulunywa ngokuthengisa:
Ukukhishwa kwezindlu (imali ekhokhwa)
Ukusulwa kwezindleko zesevisi / imali yesondlo
Ukuhlaliswa kokupholisa kwe-DEWA / District
I-NOC Yonjiniyela uma kudingeka
Imali edluliswayo ekhokhwa eMnyangweni Wezemihlaba
Uma kukhulunywa ngokuthenga:
Imali yesivumelwano ngokwesivumelwano sokuthengisa phakathi komthengi nomthengisi
Ukuxhumana kweziphathimandla zikagesi nezamanzi
Imali yokufaka isicelo sokubambisa ngempahla uma kudingeka
Izimali zomsebenzi womphakathi
Izimali zokuphatha ezixubile eMnyangweni Wezomhlaba
Hlangana nommeli ngaphambi kokuthenga impahla eDubai, e-UAE Qiniseka ukuthi izinkontileka zikuboza ngokuphelele uma kunengxabano noma icala. Sishayele manje +97150 6531334
Abafuyi bathenga impahla e-UAE
Abezizwe (abangahlali e-UAE) nabahlali abafudukayo bangathola amalungelo obunikazi bempahla ngaphandle kwempahla